Ingabe i-MK-677 (Ibutamoren) isebenza kahle Kwakha Imisipha? Ukubuyekezwa Okumnandi
/Blog/Gallery/Ingabe i-MK-677 (Ibutamoren) isebenza kahle Kwakha Imisipha? Isibuyekezo Sarm [2019 NEW]
Posted on 09 / 29 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
I-1.Yini i-MK-677 (Ibutamoren)?
I-MK-677 (Ibutamoren) i-powder (159752-10-0) iyi-hormone yokukhula eyimfihlo ye-secretagogue (GHS). I-ukukhula kwe-secretagagueue i-compound eyenzelwe ukusebenza njenge-secretagogue ukusiza ukwandisa amazinga we-hormone okukhula. Kudingeka ama-hormone okukhula ukuze umzimba wakho usebenze kahle. Lokhu kukusiza ukuthi uthuthukise ukuthuthukiswa kwezicubu zomzimba.
MK-677 (Ibutamoren) powder ayiphazamisi ezinye izinqubo zomzimba nezebhayoloji njengokukhiqizwa kwehomoni yemvelo. Kusho ukuthini lokhu ukuthi uzothola ukwanda kwamazinga okukhula kwama-hormone ngaphandle kokuthola imiphumela emibi njengokucindezelwa kwe-testosterone. Izinzuzo zokwakha zomzimba zeMK 677 ziningi kepha sizoxoxa ngazo zonke kamuva kulesi sihloko.
I-2. Kungani iMK-677 (Ibutamoren) inegama elihlukile?
I-Ibutameron yaziwa nangokuthi i- mk677 nutrobal, Ibutamoren Mesylate futhi abanye abantu bangayibiza ngokuthi i-MK 677 (Ibutamoren )armarm. Onke la magama abhekisela endaweni efanayo. Lokhu kungenxa yokuthi abanye abantu bamaketha i-computer njenge-sarm kodwa abanye ochwepheshe bathi akuyona eyemndeni wezintolo.
I-Ibutamoren nayo ibhekwa njengesidakamizwa esikhethekile ngoba kuyivelakancane ukuthola umuthi onamandla wokuvuselela amazinga ama-hormone okukhula kanye ne-IGF-1 (Insulin-like ukukhula factor).
I-3. Isebenza kanjani iMK-677 (Ibutamoren)?
I-MK-677 (Ibutamoren) powder (159752-10-0) ama-nutrobal asebenza ngokwandisa ukuvikeleka kwe-hormone yokukhula (i-GH) kanye nezici zokukhula-1 (IGF-1) .Kufinyelela lokhu ngokulingisa ukuthi ama-ghrelin hormone asebenza kanjani. IGhrelin yi-hormone eyenzeka ngokwemvelo uma ungakaze uyithole ngaphambili.
Lokhu kuyenza ikwazi ukubopha kalula kwenye ye-GHSR (i-ghrelin receptors) yobuchopho. Lapho isikhuthaziwe, ama-ghrelin receptors abese enza ukukhiqizwa kwe-hormone yokukhula engqondweni. Isebenza njenge-neuropeptide ku-CNS (uhlelo lwangaphakathi lwezinzwa). Le-hormone ithandwa ngamandla ayo okuvusa inkanuko.
Ilawula nokusatshalaliswa kwamandla emizimbeni yethu futhi inomthelela wendlela umzimba wokugaya amafutha. Kungathinta nekhono lomzimba lokululama ezimweni ezinjengokukhuluphala kanye nesifo sikashukela sohlobo lwe-2.
Uma isetshenziswa ngokwayo, i-mk 677 inamandla okukhulisa ukukhiqizwa kwe-HGH ngaphandle kokuphazamisa amanye ama-hormone. Abaningi balabo abayithatha bancoma futhi isengezo se-mk 677 ngoba ayicindezeli amazinga akhona e-testosterone nama-hormone okukhula, okuyibhonasi enkulu uma ubheka inzuzo.
I-4. Izinzuzo ze-MK-677 (Ibutamoren)
Ukukhula Kwemisipha Nokubuyiselwa Kwempilo
Enye yezinzuzo ezinkulu ze-mk 677 ithuthukisiwe ukukhula komsipha kanye nokululama. Njengoba i-mk 677 isengezo ikhulisa amazinga we-IGF-1 ne-GH umsebenzisi angawafaka ngosayizi omningi kalula. Lokhu kusekelwa ucwaningo nesayensi. Ucwaningo olwenziwe lukhombisa ukwanda okukhulu kwesisindo se-mussle ikakhulukazi kubantu abakhula ngokushoda kwama-hormone namadoda amadala ikakhulukazi iminyaka ye-60 nangaphezulu. Ukubuyekezwa okuningi kwe-mk 677 kusuka kubasebenzisi nakho kusikisela ukuthi lesi sidakamizwa sinomphumela omuhle ekwakhiweni kwezicubu zomzimba.
Ukwandisa amathambo wesisindo
Njengoba izilonda zobudala, ukungalingani kwamathambo kuyancipha. Abantu abaningi asebekhulile banenkinga yokuqina kwamathambo kanye namathambo okubangela ukungahambi kahle kobuhlungu. Ezinye izingane kanye nabantu abadala abancane bangadlula kulokhu futhi kodwa kungahle kube ngenxa yokuncipha kwethambo lethambo. I-MK-677 powder isengezo ivuselela i-hormone yokukhula futhi isebenze ukuguqulwa kwamathambo. Yile ndlela umuthi okwazi ukusiza ngayo ngokuqinisa amathambo.
Kuvimbela Ukuqothuka Kwemisipha
Ocwaningweni lwesayensi olwenziwe kubantu abayisishiyagalombili bezila ukudla, u-Ibutamoren mk 677 wakwazi ukubuyisa ukuchitheka kwemisipha nokulahleka kwamaprotheni. Olunye ucwaningo luveze ukuthi umuthi futhi usize iziguli esezikhulile ezazinama-hip fractures ukuba zithuthukise amandla emisipha nezinzuzo ezingcono.
Ukukhula kweTendon kanye nokuvimbela okulimazayo
Cishe wonke owakha umzimba uyavuma ukuthi ukulimala okuthile kubambezele kanjani intuthuko yakhe ngokubavalela ejimini izinsuku ezithile, noma amasonto. Uma ngokuqhubekayo usebenzisa isikhathi sakho esiningi ejimini, ukulimala akunakugwenywa. Futhi, ukwanda okusheshayo kwesisindo semisipha ngenxa yezikhathi zakho zokuzivivinya kanzima, kungafaka ingcindezi enkulu ezicutshini zakho kufaka phakathi amathambo aholela ekulimaleni.
Uma kukhulunywa ngokulungiswa kwama-tendon owonakele, ama-ligaments, namathambo, kubalulekile ukukhula kwe-hormone. Ngokwandisa amazinga e-hormone okukhula, i-mk 677 isengezo iqinisekisa ukuthi izicubu ezithintekayo ziyalungiswa futhi zigcinwe ziphilile. Ukuqina kwamathambo kuthuthukiswa kakhulu futhi ngenxa yalokho amathambo akho azothuthukiswa kukunika amandla okubamba izicubu eziningi zemisipha. Ngenxa yalokhu, ngeke usathambekela ekulimaleni okujwayelekile.
Iningi labasebenzisi liyavuma ukuthi i-mk677 ibasizile qinisa ukulahleka kwamafutha. Imiphumela yokulahlekelwa kwamafutha ye-Mk 677 kubikwa iyamangaza mhlawumbe ngoba i-GH iyona kuphela i-hormone engakusiza ukuthi ushise amanoni angaphansi kwe-visceral kanye ne-visceral ngenkathi ikwenza ukwazi ukuthuthukisa isisindo semisipha esindayo. Ngenxa yalokhu, i-Ibutamoren ihlala yengezwa ezinhlelweni zokubuyiselwa komzimba.
Isikhumba esingcono, izipikili nezinwele
I-hormone yokukhula sekufakazelwe ukuthuthukisa amaseli wesikhumba. Njengoba i-MK-677 isebenzisa i-GH, yingakho umuthi ukwazi ukuvuselela futhi uvuselele ukubukeka kwezinwele, izinzipho nesikhumba.
Enye inzuzo ye-mk 677 ukuthi ivusa i-ghrelin receptor futhi ingadala i-nootropic imiphumela. Ngokuya ngocwaningo olushicilelwe olushicilelwe yi-NCBI kungasiza ukuthuthukisa ukusebenza kwengqondo ngokuthonya izindlela ezimbili ngokungaqondile. Lezi zinqubo zibandakanya ukukhulisa i-IGF-1 ezisiza ukuthuthukisa ukugcinwa kwememori nekhono lokufunda. Futhi, ngokusebenzisa ukukhuphula ikhwalithi nenani lokulala kwe-REM. Ukulala kubalulekile ngoba kuqinisekisa ukusebenza okuhle kwengqondo.
Vimbela ukukhula kwe-hormone yokukhula
I-Mk 677 inyusa i-IGF-1, IGFBP-3, kanye namazinga okukhula kwama-hormone ezinganeni ezinokushoda kwama-hormone wokukhula ngaphandle kokuguqula ukugxila kwe-cortisol, i-insulin prolactin, ushukela, i-thyroxine (T4), i-thyrotropin noma i-triiodothyronine (T3).
I-Ibutamoren ikhombisile umphumela ofanayo emadodeni angenamandla i-GH, kepha ushukela ne-insulin kukhuphuka, nakho.
Ama-hormone okukhula aqhakambisa ukwelashwa kokulimala nokuvuselelwa kwezicubu, ngakho-ke i-Mk 677 isiza ngalokhu ngokwandisa amazinga ama-hormone okukhula. Lokhu kusekelwa yimibiko yabakhi bomzimba abake basebenzisa ibutamoren ngaphambili.
Abantu abasebenzise i-MK-677 ngaphambi kokubika umuzwa wokukhululeka kwabazimeleyo.
Ukuba yi-Ghrelin Mimetic kufanele ulindele ukuthatha ukudla okuningi ngenkathi ungaphansi kwe-Ibutamoren. Noma ngabe lokhu kunenzuzo noma kubi ngokwenhloso yakho, kuzodingeka uqonde ukuthi ungomunye wemiphumela engenakuphikiswa ye-mk 677.
Ukwenza kahle konke
I-Ibutamoren isebenza kahle ekuqiniseni ukungatheleleki kanye nokuba kwethu kahle. Amandla omzimba wakho wokulwa nokuhlala kude nezinkinga zesikhathi sonyaka kanye nokwanda komzimba kuphakama kakhulu. Uzoqala impilo enethezekile egcwele ukuthula kwengqondo.
I-5. Umjikelezo we-MK-677 (Ibutamoren)
ICycle 1: Ukuzuza izinzuzo ezinhle ze-MK 677 (Ibutamoren) powder, udinga ukuqala ngama-10mg ngamahora we-24 kumaviki okuqala we-11 ngaphambi kokungeza kuma-20-25mg ngamahora we-24 kamuva ezizungeze i-12th isonto. Lokhu kungathathwa njengoketshezi, ngomlomo noma nge-capsule.
I-cycle 2: Ungaqala futhi nge-15mg ngamahora we-24 futhi unwebe ubude bakho bomjikelezo we-MK 677 ngaphezu kwamaviki we-12. Ngokwenza kanjalo, ngeke kudingeke ukhathazeke ngezinkinga nge-pituitary gland yakho noma eminye imiphumela emibi.
I-cycle 3: Iningi labakhi bomzimba abeza emjikelezweni bezokwandisa umthamo wabo we-MK 677 ku-50mg ngosuku futhi balondoloze ubude bomjikelezo we-MK 677 wamasonto ayisishiyagalombili.
ICycle 4: Uma ufuna ukwakha izicubu, abasebenzisi baphakamisa ukuthatha umthamo we-Ibutamoren we-30mg ngamahora we-24.
I-cycle 5: Uma inhloso yakho eyinhloko ukulahla amanoni, abasebenzisi abaningi abanolwazi basikisela ukuthatha i-20mg ngamahora we-24.
I-cycle 6: Uma umgomo wakho oyinhloko ukuphulukisa ukulimala, umthamo we-MK 677 we-10-20mg ngosuku unconyelwa kakhulu.
Izindaba ezimnandi ukuthi ngeke udinge i-PCT (Post Cycle Therapy) ye-mk 677 njengoba ingaphazamisi i-hormone ethile.
I-6. Yiliphi umthamo omuhle kakhulu we-MK-677 (Ibutamoren)?
Ukucwaninga kwethu kanye nemibiko evela kubasebenzisi abanolwazi kubonisa ukuthi i-20mg kuya ku-30mg yiyona umthamo omkhulu kakhulu we-MK 677. Abanye abasebenzisi babike ukuthi bathatha ngaphezu kwe-30mg ye-ibutamoren ngosuku, kodwa lokhu akunikezanga imiphumela engcono. Ubude bomjikelezo we-MK 677 ubonakale ubaluleke kakhulu kunomthamo we-ibutamoren.
Kubalulekile ukuthi uthathe i-ibutamoren isikhathi eside. Amazinga ama-hormone okukhula kufanele akhule kancane emzimbeni wakho. Ukwakheka kancane kancane kwamahomoni kungathatha amasonto ambalwa ngaphambi kokuthi uqale ukuzwa imiphumela.
Igoli lakho linquma nenani le-mk 677 okudingeka uyithathe. Nayi imithamo enconyelwe izinhloso ezihlukile.
Ukwakhiwa kwemisipha: 30mg ngosuku
Ukulahleka kwamafutha: 20mg ngosuku
Ukwelashwa okulimazayo: I-10-20mg ngosuku
Uma ungakazisebenzisi I-ibutamoren powder (I-159752-10-0) ngaphambili, kunconywa ukuthi uqale nge-10mg ukubona ukuthi umzimba usabela kanjani kuyo.
I-7. Ingabe i-MK-677 (Ibutamoren) Inemiphumela Emibi?
I-Mk-677 inemiphumela emibi emincane kakhulu futhi emincane uma ikhona, futhi uma kwenzeka itholakala kalula. Nayi eminye imiphumela emibi:
Ukulala isikhathi eside
Abanye abasebenzisi bangalala bengaphazanyiswa isikhathi esingamahora we-12 ngemuva kokuthatha i-ibutamoren okuholela ekuzizwa ukukhathala okujwayelekile ngosuku olulandelayo. Uma uhlangabezana nalokhu, kufanele wehlise umthamo noma uhlukanise kabili kathathu ngosuku futhi lo mphumela wecala le-MK 677 uzovele uhambe yedwa.
Yize kungenzeki kubo bonke abasebenzisi, abanye abasebenzisi bathola imisipha emincane lapho bethatha i-ibutamoren. Lo mphumela wecala weMK 677 uzophinde ukhathale uma usuyekile ukuthatha ibutamoren.
Ungahlangabezana nokugcinwa kwamanzi kanye nesifiso sokudla kepha lokhu kuvame ukuvela lapho uthatha umthamo omkhulu kakhulu we-ibutamoren. Ngemuva kwesikhathi esithile, yonke le miphumela emibi izokuya ngokwabo uma uyeka ukuthatha i-mk 677.
I-8. Iyini ingxenye yokuphila kweMK-677 (Ibutamoren)?
I-Mk 677 isigamu sempilo cishe amahora angama-24. Kusho ukuthini lokhu emcabangweni wokuthi umuntu angaphuza umthamo wakhe wansuku zonke ngasikhathi sinye ngosuku. Kepha kuye kwaqashelwa ukuthi uma uthatha umthamo owodwa ngosuku, amazinga ama-hormone akho okukhula angahlehla ngasikhathi sinye.
Lokhu kungalandelwa umuzwa wokukhathala noma wehlule. Lokhu kungagwenywa ngokuthi kwehlukanise umthamo wakho kube kabili ngosuku olulodwa noma udle umthamo ngaphambi nje kokulala. Ngokwenza kanjalo, uzolala njengenkosi futhi umkhiqizo wakho ngeke uthintwe ngosuku olulandelayo.
I-9. Imiphumela ye-MK-677 (Ibutamoren)
Kunembile ukusho ukuthi imiphumela ye-Mk 677 ekwakhiweni komzimba kanye nokunye ukusetshenziswa okushiwo ngaphambili yinhle. I-Ibutamoren iyindawo esebenza kahle kakhulu njengoba ithuthukisa ukwakhiwa kwemisipha, futhi isize ngokuthuthukisa isikhumba, izinwele kanye nokutsha kwamafutha futhi.
Abasebenzisi abahlanganyela uMk 677 ngaphambili nangemva kwezithombe nemiphumela bakhombisa ukuthi ibutamoren yakwazi ukukushintsha kakhulu ukwakheka komzimba wayo. Bakwazi ukwengeza inani elikhulu lemisipha ngenkathi belahlekelwa amanye amafutha omzimba.
Lapho i-ibutamoren isetshenziswa ndawonye namanye ama-SARM wokwakha umzimba afana I-MK-2866 futhi I-LGD-4033, iyakwazi ukuguqula umzimba wakho ngokuphelele, inikeze imiphumela eshaya ingqondo. Kufanele futhi uqaphele ukuthi udinga ukusebenza futhi unakekele ukudla okufanele uma ufuna ukuthola imiphumela emihle yokwakha umzimba ye-Ibutamoren powder (159752-10-0).
I-10. Ingabe iMK-677 (Ibutamoren) FDA ivunyelwe?
Njengoba i-ibutamoren iseyi-Investigational New Drug, ayikavunywa i-FDA. Kodwa-ke, i-mk 677 isetshenziswe ngocwaningo kwabanye abakhi bomzimba abasebenza emphakathini owakha umzimba abavuma ukuthi umuthi uphephile. Kubuye kufundwe kabanzi ngososayensi nabo abavuma ukuthi umuthi uyasebenza.
I-11. Ingabe i-MK-677 (Ibutamoren) iphephile?
I-Ibutamoren iphephile uma ithathwa kumthamo ophakanyisiwe. Kuphephile kakhulu kubantu abanempilo. Kodwa-ke, uma umuthi uthathwa ngemithamo ephezulu kunalokho okunconyiwe, abasebenzisi bangathola ukuqina kwe-edema nemisipha. Kepha kungani kufanele ufune ukuthatha imithamo ephakeme kunomuthi onconyiwe?
Futhi, imiphumela emibi embalwa engahle itholakale iyodwa uma usuyekile ukusebenzisa i-Ibutamoren. Futhi, zilawuleka kalula noma usebenzisa umuthi.
I-12. Ingabe i-MK-677 (Ibutamoren) isemthethweni ukuthenga?
Iningi labantu liyabuza, ingabe iMK 677 iyathengiswa? Uma ungomunye wabo, ungakhathazeki, sizophendula lo mbuzo lapha.
Njengamanje, i-MK-677 powder (159752-10-0) itholakala kuphela ngokuthengiswa njengomuthi wokucwaninga, ngakho-ke ngokweqiniso, kunzima ukuthola lo muthi uma uthi uwufuna wokwakha umzimba. Noma kunjalo, iningi labakhi bomzimba lithi bayithenga ukuze isetshenziselwe ucwaningo kuphela ukuze bathethelele ukuthenga kwabo. Ngaphambi kokuthi uchofoze inkinobho ethi 'MK 677 buy online', qiniseka ukuthi umphakeli othengayo kuye kusemthethweni futhi kusemthethweni. Kufanele uqiniseke ukuthi uthenga izinhlobo ezihlanzeke kunazo zonke zomuthi ngoba uhlobo olungcolile lwe-nutrobal lungahle lube nemiphumela emibi kakhulu.
I-13. I-MK-677 (Ibutamoren) Yokwakha Umzimba
I-Ibutamoren muva nje idume kakhulu emphakathini owakha umzimba. Isizathu esikhulu sokuthi i-mk677 i-nutrobal isetshenziswe kakhulu ekwakhiweni kwemisipha ngenhloso yokuqinisa amazinga we-GH. Wonke umuntu owakha umzimba uhlale abheke phambili ekubeni ngumphathi futhi omkhulu kunabo bonke.
Njengoba ama-hormone okukhula edlala indima enkulu ekwakheni umzimba, afuna ukuthi abe sezingeni eliphakeme kakhulu ngangokunokwenzeka ngenkathi ehlala ephephile. Ukuphakama kwamazinga ama-hormone okukhula, okusheshayo futhi kube lula ngokwakha umzimba uyakwazi ukwengeza izicubu ezengeziwe.
Njengoba ama-Hormones Okukhula ebiza kakhulu azikho ezinye izixazululo ezinobungani besikhwama sokukhulisa ama-hormone okukhula, ngaphandle kweNutrabol. I-Mk 677 iyindlela engabizi kakhulu uma iqhathaniswa I-HGH (Ama-Hormones Akhulayo Womuntu) futhi ingakwazi ukukhulisa ngempumelelo amazinga ama-hormone okukhula komuntu ngezinga elikhulu.
Ungenza i-oda yenqwaba ye-MK-677 online. I-MK 677 ethengiswayo iyatholakala ngokusemthethweni njengekhemikhali yokucwaninga. Uzobona futhi abakhi abaningi bomzimba abathenga i-ibutamoren bese bethi yenzelwe ukusetshenziswa kocwaningo kuphela.
Kubalulekile futhi ukuthi wazi ukuthi iNutrobal ihlala igcwele njalo Ama-SAR. Isibonelo esifanelekile yinhlanganisela ye-S23, i-MK-677, ne I-RAD140 (Testolone) powder.
Umtapo wezincwadi wezokwelapha wase-US, izikhungo zikazwelonke zezempilo, uRalf Nass, uSuzan S. Pezzoli, uMary Clancy Oliveri, uJames T. Patrie, uFrank E. Harrell, uJr., uJody L. Clasey, uSteven B. HeymsfieldMark A. Bach, uMary U-Lee Vance, noMichael O. Thorner, i-MB, i-BS, i-D.Sc, Imiphumela ye-Oral Ghrelin Mimetic ekubumbeni Umzimba kanye Nemiphumela Yeklinikhi Kwabantu Abadala Abaphilayo: Isivivinyo Esilawulwa Ngobunzima.
UJanssen I, Heymsfield SB, uWang Z, uRoss R. Skeletal izicubu zemisipha nokusatshalaliswa kwamadoda nabesifazane be-468 abaneminyaka engu-18-88 yr. J Appl Physiol. I-2000; 89: 81-88
U-Adunsky A., uChandler J., u-Heyden N., uLukkiewicz J., uScott BB, uBerd Y.,. . . I-Papanicolaou DA (2011). I-MK-0677 (ibutamoren mesylate) yokwelashwa kweziguli ezilulama ekuqhekekeni kwe-hip: ucwaningo olunhlobonhlobo, oluhleliwe, olwenziwe nge-IIb lwesigaba. Izingobo zomlando zeGerontology ne-Geriatrics, 53 (2), 183-189.
I-Nootropics Enhle kakhulu ye-Aniracetam Powder yokuthuthukiswa kwengqondo
Indlela Yokukhetha I-Steroids Powder Suppliers ku-12 Izinyathelo
I-10 edumile kakhulu ye-Anabolic Steroids Raws Material Imibono evamile eyiphutha ezweni le-anabolic steroid